China China Yepamusoro Yemhando Yekutengesa Kurema Yakagadzika Dumbbell Set vagadziri uye vanotengesa | Meiao
China Yakakwira Hunhu Zvekutengesa Kurema Yakagadziriswa Dumbbell Set
Kanda simbi uye neoprene yakavharwa
Meiao mutambo ndeimwe yevatengesi veGolden Plus yakanga yaongororwa nealibab.com .Tichava mumwe wevanyanzvi vepamusoro nyeredzi iyo yaive ne24years Factory Experiece.
Bhokisi rega rega rezvinhu zvemhando yepamusoro raizoongororwa zvakapetwa zvisati zvatumirwa, uye mushumo wekuongorora mhando unozotumirwa kune vatengi vedu nezvigadzirwa, uye tinofara kukwikwidza Chechitatu-bato rekuongorora kambani mhando cheki.
Meiao mitambo ine anopfuura 6700 mativi emamirimita uye 7production mitsara inomhanya mazuva ese 2 mashifts ane hombe huwandu
5.Nguva yakareba sei kugadzirira odha?
Tine zvakawanda zvigadzirwa zvirimo. Kazhinji inoda 10days, Huru huwandu hunoda kutaurwa.
6. Zvakadini nebasa rako?
Shipment uye sampuro yemhando yekutevera inosanganisira yehupenyu nguva.
Pashure: Wholesale barbell uremu ndiro Bhawa Kuchengetera rack Gym Equipment mubati
Zvadaro: Muviri Kuvaka Exercise Kurema Aerobic Musanganiswa Barbell Set
Gym uremu mutambo 30cm dumbbell akaisa uye nembariro
Adjustable chrome Dumbbell uremu vachisimudza 5-40k ...
Kurema Kusimudza Midziyo 50kg inogadziriswa Chrome ...
15kg yokurovedza muviri michina chinjika sirivha Chrome coa ...
Wholesale Bodybuilding Gym 50Kg Dumbbell Barbel ...